Kitra – Can 2022: lavon’ny Malianina ny Tonizianina | NewsMada
Kitra – Can 2022: lavon’ny Malianina ny Tonizianina
Tsy nahatohitra ny Voromaherin’i Mali ny Voromaherin’i Carthage avy any Tonizia. Faharesena tsy nampoizin’ny Tonizianina satria tena nanehoan’ny Malianina ny heriny tanteraka izy ireo.
Ratsy fanombohana toy ny nahazo ny Les Fennecs Alzeria ihany koa ny Voromaherin’i Carthage an’i Tonizia, teo amin’ny andro voalohany ho an’ny vondrona “F”. Fihaonana notanterahina omaly tao amin’ny kianja Limbe Stadium. Resin’i Mali tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 mantsy ry zareo.
Nizara roa miavaka tsara ny fizotry ny lalao. Nanjakan’ny Malianina ny tapa-potoana voalohany. Nofehezin’izy ireo tanteraka ny kianja, izay notarihin-dry Traoré sy ry Djenepo. Tsy nahatafavoaka baolina mihitsy ny Tonizianina, nahitana an-dry Sliti sy Mejbri ary i Skhiri.
Na izany aza, tsy nisy ny baolina maty teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Fidirana faharoa, mbola nanohy ny fanafihany toy ny tamin’ny fidirana voalohany ihany ny Malianina. Nahitam-bokany izany satria nahazo “penalty” ry zalahy teo amin’ny minitra faha-48 rehefa nandona ny baolina tamin’ny tanany, tao anaty faritra tsy azo ivalozana, i Skhiri, izay nahazo karatra mavo. Tafiditra ny daka nataon’i Kone, ka nitarika tamin’ny isa, 1 no ho 0 ry zareo Voromaherin’i Mali.
Tsy nambinina ny Tonizianina
Nanomboka teo, nifoha tamin’ny torimasony ny Tonizianina, nisesy ny fanafihan’izy ireo, saingy tsara fiarovantena ny Malianina. Tsy nahakivy azy ireo izany fa mbola nitady hirika hatrany hampidiram-baolina. Minitra faha-77, nahazo “penalty” ihany koa izy ireo, saingy tsy matin’i Khazri, kapiteny izany fa voasakan’i Mounkoro, mpiandry tsatoby, ny dakany. Tsy nambinina ry zalahy satria na dia efa nilalao 10 aza ny Malianina, taorian’ny karatra mena azon’i El Bilal, teo amin’ny minitra faha-87, tsy nety nahafaty baolina mihitsy izy ireo. Naneho fahatezerana tamin’ny mpitsara ny Tonizianina, tany amin’ny minitra farany, izay nihevitra fa tsy ampy 90 mn ny fotoana nilalaovana.
Hitohy amin’ity anio ity ny fifanintsanana ka hiverina hiakatra kianja indray ny vondrona «A», hanatontosa ny andro faharoa. Fihaonan’ny ekipa resy sy mandresy satria Kameronina, hidona amin’i Etiopia ary hifanandrina i Cap Vert sy i Borkina Faso. Tafita amin’ny dingana ampahavalon-dalana i Cap Vert sy ny Liona tsy voafolak’i Kameronina raha toa ka samy mahazo fandresena.